ရိုးမြေကျအောင် ပေါင်းဖက်သွားရမယ့် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားက ဒီအပြုအမူ (၁၀) ချက် - Achawlaymyar
ရိုးမြေကျအောင် ပေါင်းဖက်သွားရမယ့် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားက ဒီအပြုအမူ (၁၀) ချက်
November 30, 2020 by Achawlaymyar
ချစ်သူဖြစ်နေစေဦးတော့။ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အဆင်မပြေ၊ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်ရတာ၊ ဘာမဟုတ်တာလေးတွေနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုကိစ္စတွေ ခဏခဏ ဖြေရှင်းရတယ်ဆိုရင် သင်ဟာ သင့်အချစ်ရေးကို စိတ်ကုန်လာမှာပါ။
အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ သင့်အချစ်ရေးအတွက် သင်ဟာ သူ့ကိုသာ လက်တွဲဖို့တောင် သေချာနေပြီဆိုရင်တော့ ဒီလိုအချက်ကလေးတွေကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၁။ နှစ်ဦးသားအကြိုက်တူတာလေးတွေ ဝေမျှတတ်ကြတယ်။
ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အားကစား၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းအမျိုးအစား ကိုယ်ဖတ်တဲ့စာအုပ်မျိုးစတာတွေကို သူနဲ့အတူ အမြဲဝေမျှတတ်တယ်။ သူ့အကြိုက်ကိုလည်း ကိုယ်ကအလေးထားတတ်တယ်ဆိုရင် ဒါဟာရေရှည်သွားမယ့်အတွဲတွေရဲ့ ပုံစံပါပဲ။
၂။ သူကြိုက်တာတွေ ကိုယ်လိုက်မကြိုက်နိုင်လည်း ကိစ္စမရှိဘူး။
ကိုယ်ကြိုက်တာ သူမကြိုက်လို့ သူရော၊ သင်ကပါ စိတ်ဆိုးတာမျိုးတွေ မရှိဘူး။ ပြသနာမဖြစ်ဘူး။ လက်ခံနားလည်ပေးတတ်တာမျိုးကလည်း နှစ်ဦးသားမြဲစေမယ့် အချက်ပါပဲ။
၃။ ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဖူးတဲ့ သင့်လျှို့ဝှက်ချက်တွေ သူ့ကိုပြောပြတတ်တယ်။
အရင်တုန်းက ထားခဲ့၊ တွဲခဲ့ဖူးတဲ့ ချစ်သူရည်းစားတွေကို သင်တစ်ခါမှ မပြောပြဖြစ်ခဲ့တဲ့ သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကို သူကို အကုန်ဖွင့်ဟဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူ့ကိုသင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာ ပြသလိုက်တာပါပဲ။
၄။ အချိန်တိုင်းလိုလို သူ့လက်ကလည်း ကိုယ့်ဆီမှာ၊ ကိုယ်လက်ကလည်း သူ့ဆီမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့အထိပဲ။
အထိအတွေ့ဟာ အရေးမကြီးဘူးဆိုပေမယ့် သူ့ပခုံးလေးကိုင်ထားတာ၊ သူက ကိုယ့်ပါးလေး လာဆွဲတာမျိုးတွေဟာ သမီးရည်းစားတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းသင်္ကေတတွေပါ။ မရှိလို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။
၅။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ပျော်ရွှင်စရာ ဘယ်ကိစ္စမဆို သူနဲ့အတူပဲ ဖြတ်သန်းချင်တယ်၊ ရင်ဆိုင်ချင်တယ်။
ခရီးတစ်ခုခုသွားတာမျိုး၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အခိုက်အတန့်အားလုံးသူနဲ့အတူ ကုန်ဆုံးချင်တာမျိုး စတာတွေဟာ သူနဲ့အတူ အသက်ကြီးတဲ့အထိ ဒီလိုအရာတွေနဲ့ ကုန်ဆုံးဖို့ ရည်ရွယ်ထားလို့ပေါ့။
၆။ ရန်ဖြစ်လိုက်ရင်လည်း သေချာညှိုနှိုင်းခြင်းနဲ့သာ အဆုံးသတ်ကြတယ်။
ချစ်သူနှစ်ဦး ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်း အနိုင်၊ အရှုံးတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဖဲ့ဖို့၊ ပြောဆိုဖို့ထက် ညှိုနှိုင်းပြီးရှေ့ဆက်ဖို့သာ ဦးတည်ကြတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အတွဲဆယ်တွဲမှာ တစ်တွဲလောက်သာ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်ကို သင်တို့လုပ်လိုက်တာပါပဲ။
၇။ တစ်ဦးမိသားစုကို တစ်ဦးက ချစ်မြတ်နိုးကြတယ်….
သာမာန်အားဖြင့် ချစ်သူကို ချစ်တယ်ဆိုရင်တောင် သူ့မိသားစုဝင်တွေကိုပါ မေတ္တာမထားတတ်ကြပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ သင်တို့နှစ်ဦးဟာ တစ်ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတောင် တစ်ဦးက ချစ်ခင်တယ်၊ နှစ်လိုတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ ဘယ်တော့မှ မပြတ်နိုင်တော့တဲ့ အတွဲတစ်တွဲဖြစ်လာမှာပါ။
၈။ တစ်ဦးရဲ့သူငယ်ချင်းကို တစ်ဦးက ခင်ကြတယ်….
ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါ နှစ်ဦးစလုံးအဆင်ပြေဖို့ဆိုတာ သိပ်မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေခင်မင်နေပြီဆိုရင်တော့ ဒါဟာ သင်တို့အတွဲအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ရှိနေပြီဆိုတာ သေချာစေတာပါပဲ။
၉။ ရေရှည်အတွက် စိတ်ကူး၊ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ချက်တွေ တူညီကြတယ်။
ဘယ်အချိန်ဘယ်လိုလေး၊ ဘာလုပ်ကြမယ်၊ ဘာတွေစီစဉ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ အကြမ်းဖျင်းစီမံချက်တွေ တူညီနေကြတယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးစလုံး တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဘယ်တော့မှ မခွဲဘူးဆိုတာ သက်သေပြတာပဲပေါ့။
၁၀။ တစ်ဦးကဘာပြောမလဲဆိုတာ တစ်ဦးကကြိုသိနေတတ်ကြတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ သူပြောမယ့်စကားကို သူ့ဘာသာသူ ပြန်စဉ်းစားနေရချိန် ကိုယ်ကဝင်ပြီး အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ သူပြောမယ့်အရာကိုတောင် ကိုယ်က ကြိုသိ၊ ကြိုတွေးတတ်နေခြင်းဟာ သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ် ဘယ်လောက်နီးစပ်နေသလဲဆိုတာ ပြသနေတာပါ။
ခဈြသူဖွဈနစေဦေးတော့။ တဈဦးနဲ့တဈဦး အဆငျမပွေ၊ ငွငျးခုနျရနျဖွဈရတာ၊ ဘာမဟုတျတာလေးတှနေဲ့ သဘောထားမတိုကျဆိုငျမှုကိစ်စတှေ ခဏခဏ ဖွရှေငျးရတယျဆိုရငျ သငျဟာ သငျ့အခဈြရေးကို စိတျကုနျလာမှာပါ။
အဲ့ဒီလိုမှ မဟုတျပဲ သငျ့အခဈြရေးအတှကျ သငျဟာ သူ့ကိုသာ အဆုံးထိ လကျတှဲဖို့တောငျ သခြောနပွေီဆိုရငျတော့ ဒီလိုအခကျြကလေးတှကွေောငျ့ ဖွဈပါလိမျ့မယျ။
၁။ နှဈဦးသားအကွိုကျတူတာလေးတှေ ဝမြှေတတျကွတယျ။
ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ အားကစား၊ ကိုယျကွိုကျတဲ့သီခငျြးအမြိုးအစား၊ ကိုယျဖတျတဲ့စာအုပျမြိုးစတာတှကေို သူနဲ့အတူ အမွဲဝမြှေတတျတယျ။ သူ့အကွိုကျကိုလညျး ကိုယျကအလေးထားတတျတယျဆိုရငျ ဒါဟာရရှေညျသှားမယျ့အတှဲတှရေဲ့ ပုံစံပါပဲ။
၂။ သူကွိုကျတာတှေ ကိုယျလိုကျမကွိုကျနိုငျလညျး ကိစ်စမရှိဘူး။
ကိုယျကွိုကျတာ သူမကွိုကျလို့ သူကရော၊ သငျကပါ စိတျဆိုးတာမြိုးတှေ မရှိဘူး။ ပွသနာမဖွဈဘူး။ လကျခံနားလညျပေးတတျတာမြိုးကလညျး နှဈဦးသားမွဲစမေယျ့ အခကျြပါပဲ။
၃။ ဘယျသူ့ကိုမှ မပွောဖူးတဲ့ သငျ့လြှို့ဝှကျခကျြတှေ သူ့ကိုပွောပွတတျတယျ။
အရငျတုနျးက ထားခဲ့၊ တှဲခဲ့ဖူးတဲ့ ခဈြသူရညျးစားတှကေို သငျတဈခါမှ မပွောပွဖွဈခဲ့တဲ့ သငျ့ကိုယျရေးကိုယျတာ ကိစ်စတှကေို သူကို အကုနျဖှငျ့ဟဖွဈတယျဆိုတာ သူ့ကိုသငျဘယျလောကျယုံကွညျနတေယျဆိုတာ ပွသလိုကျတာပါပဲ။
၄။ အခြိနျတိုငျးလိုလို သူ့လကျကလညျး ကိုယျ့ဆီမှာ၊ ကိုယျလကျကလညျး သူ့ဆီမှာ ဖွဈတတျတဲ့အထိပဲ။
အထိအတှဟေ့ာ အရေးမကွီးဘူးဆိုပမေယျ့ သူ့ပခုံးလေးကိုငျထားတာ၊ သူက ကိုယျ့ပါးလေး လာဆှဲတာမြိုးတှဟော သမီးရညျးစားတှရေဲ့ ခဈြခွငျးသင်ျကတေတှပေါ။ မရှိလို့ ဘယျဖွဈမလဲ။
၅။ စိတျလှုပျရှားစရာ၊ ပြျောရှငျစရာ ဘယျကိစ်စမဆို သူနဲ့အတူပဲ ဖွတျသနျးခငျြတယျ၊ ရငျဆိုငျခငျြတယျ။
ခရီးတဈခုခုသှားတာမြိုး၊ စိတျလှုပျရှားစရာ အခိုကျအတနျ့အားလုံးသူနဲ့အတူ ကုနျဆုံးခငျြတာမြိုး စတာတှဟော သူနဲ့အတူ အသကျကွီးတဲ့အထိ ဒီလိုအရာတှနေဲ့ ကုနျဆုံးဖို့ ရညျရှယျထားလို့ပေါ့။
၆။ ရနျဖွဈလိုကျရငျလညျး သခြောညှိုနှိုငျးခွငျးနဲ့သာ အဆုံးသတျကွတယျ။
ခဈြသူနှဈဦး ရနျဖွဈတယျဆိုရငျလညျး အနိုငျ၊ အရှုံးတဈဦးနဲ့တဈဦး ဖဲ့ဖို့၊ ပွောဆိုဖို့ထကျ ညှိုနှိုငျးပွီးရှဆေ့ကျဖို့သာ ဦးတညျကွတယျဆိုရငျ ဒါဟာ အတှဲဆယျတှဲမှာ တဈတှဲလောကျသာ လုပျနိုငျတဲ့အလုပျကို သငျတို့လုပျလိုကျတာပါပဲ။
၇။ တဈဦးမိသားစုကို တဈဦးက ခဈြမွတျနိုးကွတယျ။
သာမာနျအားဖွငျ့ ခဈြသူကို ခဈြတယျဆိုရငျတောငျ သူ့မိသားစုဝငျတှကေိုပါ မတ်ေတာမထားတတျကွပါဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတျပဲ သငျတို့နှဈဦးဟာ တဈဦးရဲ့မိသားစုဝငျတှကေိုတောငျ တဈဦးက ခဈြခငျတယျ၊ နှဈလိုတယျဆိုရငျ ဒါဟာ ဘယျတော့မှ မပွတျနိုငျတော့တဲ့ အတှဲတဈတှဲဖွဈလာမှာပါ။
၈။ တဈဦးရဲ့သူငယျခငျြးကို တဈဦးက ခငျကွတယျ။
ကိုယျ့သူငယျခငျြး၊ သူ့သူငယျခငျြးတှနေဲ့ပါ နှဈဦးစလုံးအဆငျပွဖေို့ဆိုတာ သိပျမလှယျကူပါဘူး။ ဒီလိုမဟုတျဘဲ အားလုံးနဲ့ အဆငျပွခေငျမငျနပွေီဆိုရငျတော့ ဒါဟာ သငျတို့အတှဲအတှကျ ကောငျးမှနျတဲ့ အနာဂတျရှိနပွေီဆိုတာ သခြောစတောပါပဲ။
၉။ ရရှေညျအတှကျ စိတျကူး၊ စဉျးစားဆုံးဖွတျခကျြတှေ တူညီကွတယျ။
ဘယျအခြိနျဘယျလိုလေး၊ ဘာလုပျကွမယျ၊ ဘာတှစေီစဉျကွမယျဆိုတဲ့ အကွမျးဖငျြးစီမံခကျြတှေ တူညီနကွေတယျဆိုတာ နှဈဦးစလုံး တဈဦးနဲ့တဈဦး ဘယျတော့မှ မခှဲဘူးဆိုတာ သကျသပွေတာပဲပေါ့။
၁၀။ တဈဦးကဘာပွောမလဲဆိုတာ တဈဦးကကွိုသိနတေတျကွတယျ။
တဈခါတဈလေ သူပွောမယျ့စကားကို သူ့ဘာသာသူ ပွနျစဉျးစားနရေခြိနျ ကိုယျကဝငျပွီး အဆုံးသတျပေးလိုကျတာမြိုး ကွုံဖူးပါသလား။ သူပွောမယျ့အရာကိုတောငျ ကိုယျက ကွိုသိ၊ ကွိုတှေးတတျနခွေငျးဟာ သငျတို့နှဈယောကျရဲ့စိတျ ဘယျလောကျနီးစပျနသေလဲဆိုတာ ပွသနတောပါ။
Categories အချစ်နှင့်ဘဝ Post navigation
မိန်းကလေးတွေဟာ ချစ်မိပြီဆိုရင် သိပ်ကို သတ္တိရှိကြပါတယ် (ဘာလို့ လဲဆိုရင်…)
တဈပတျစာ ခုနှဈရကျသားသမီးကံကွမ်မာဟောကိနျး (29-11-2020 to 5-12-2020)